Yugawani Mediaसर्वाेच्च अदालतले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ : पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव - Yugawani Media
२०७७ फाल्गुन १३ गते बिहीबार, २२:१९ मा प्रकाशित
धनुषा, १३ फागुन । पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतन्त्र रक्षा गरी संविधान कार्यान्वयनका लागि अदालत र निर्वाचन आयोग निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
डा. यादवले नेपालको राजनीतिक दलमा आर्थिक अनुशासनसमेत नभएको आरोप लगाउनुभयो ।